Avelao ny fiainanao ary manadino ny taonanao. - Jean Paul - Quotes Pedia
Raha te-hiaina amim-pifaliana ny fiainanao, aza mieritreritra ny taonanao. Mila mandinika ianao fa ny taona dia tsy misy hafa afa-tsy isa. Ny ankamaroantsika dia maniry ny hieritreritra fa ny taona dia mila betsaka rehefa tsy mifaly amin'ny fiainanao.
Eny, miaina ambanin'ny diso isika fa tsy afaka mahita ny lafiny samihafa amin'ny fiainantsika raha antitra isika. Fa raha manokan-tena tanteraka ianao, tsy misy afaka manakana anao tsy hiaina ny fiainanao araka ny tianao indrindra. Ny zavatra iray tokony hianaranao dia ny hoe matanjaka ara-tsaina ianao hiaina ny fiainanao miankina amin'ny soatoavinao.
Miankina amin'ny toe-tsaina sy ny fahaizanao ara-tsaina ny zava-drehetra. Raha matanjaka ara-tsaina ianao dia afaka manatratra ny tanjona tadiavinao amin'ny fiainanao, na dia antitra aza ianao. Tsy hitariky ny tanjon'ny fiainanao ny taonanao. Ny hany zavatra hanampy anao amin'ny fanatontosana ny tanjonao dia ny fanirianao.
Eny, afaka takatsika fa ny vanim-potoana dia misy zavatra manan-danja hatao raha toa ka mahavita ny herin'ny vatanao. Tena zava-misy matetika ny tsy hamoizanao ny fahazarana sy ny tanjaka tamin'ny fiainanao teo aloha.
Na izany aza, araka ny nolazainay teo aloha, raha matanjaka ny fanirianao ary voaomana ara-tsaina amin'ny fanatanterahana ny tanjonao ianao, tsy misy olona afaka manakana anao amin'izany. Ny hany mila ataonao dia ny fanomanana ny tenanao ara-tsaina, ary ho hitanao fa feno fahatokisana sy angovo ianao.
Eny, raha mahavita manangona kely ianao dia ho hitanao fa be dia be ny ohatra izay nahitana ny antitra hanatrarana ny tanjon'izy ireo. Miezaha foana hanosika ny tenanao foana, ary hanampy anao hanatratra ny tanjonao tianao izany. ianao aza mila manahy momba ny taonanao satria isa fotsiny izy io.
Adinoy ny andininy
Nahazo mari-pahaizana taloha
Nahazo aingam-panahy ny resaka taloha
Mitombo ny resaka taloha
Fohy loatra ny fiainana
Miaina ao anatin'ny fotoana fohy
Fiainana fohy no iainana
Teny momba ny fiainana mahery vaika
Teny momba ny fahazoana antitra sy hendry